Kambodza: Tondradrano Faran’izay Ratsy Indrindra Tato Anatin’ny Folo Taona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Oktobra 2011 17:05 GMT
Vakio amin'ny teny Français, русский, Español, বাংলা, 日本語, македонски, English
Faritra maro no milona rano izay mahakasika tanimbary an'aliny hektara maro. Nahafatesana olona 200 mahery ihany koa ilay tondradrano, ary namotika tambajotran-dàlana, tohodrano sy fitaovana maro iraisan'ny daholobe. An'aliny ireo sekoly no nakatona manerana ny firenena ary nohalavaina ny fotoam-pisoratana anarana ho ao anaty lisi-pifidianana amin'ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna amin'ny taona ho avy. Ny Radio Free Asia dia nitatitra ny fiantraikan'ilay tondradrano, famintinan'ny Filoha Lefitry ny Komity Kambodziana Momba ny Fitantanana ny Loza Voajanahary, Nhem Vanda.
Isan'ireo faritany maro niaina ity loza voajanahary mahatsiravina ity i Siem Reap, toerana fanaovana fizahantany misy an'i Angkor Wat. Travelfish dia nanome fanavaozam-baovao momba ny toe-draharaha ao Siem Reap:
Saika manerana ny tanàna, ny ranobe izay nahavoa an'i Siem Reap nandritra ny enina herinandro dia efa nisintona tanteraka izao ary ireo làlana feno rano dia efa manomboka miverina amin'ny naha-be vovoka azy ireo.
Nitarika ny fanafoanana ny Fetiben'ny Rano ihany koa ilay tondradrano, izay fety fanao isaky ny Novambra ary mahasarika olona mihoatra ny iray tapitrisa avy amin'ireo mponina any amin'ny faritany mba hitsidika ny tanàna isan-taona. Tamin'ny taona lasa, zava-doza no namarana ilay fetibe fa nisy olona 300 mahery maty tanatinà fifanosehana iray tao amin'ny nosy Koh Pich. Nifanandrify indrindra tamin'ilay fahatondrahan'ny rano ny fotoana fahatsiarovana io zava-doza io, izay atahoran'ny mpandalina sasany fa hanamora ny fialàna andraikitra ataon'ny governemanta manoloana ny olana misy.
Maro karazana ireo endrika fanampiana noho ny maha-olombelona, na avy amin'ny eo an-toerana izany, na avy amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena, mba hanohanana ny mponina amin'ireo tanàna tondraka. Ny sasany amin'ireo mpitondra fanampiana dia ny Caritas, Green Gecko kids flood relief initiative sy ny Japan Alumni of Cambodia's Fund for Flood Relief .
Chan Sovannara koa dia manoratra mikasika ilay tondradrano mahatsiravina